Ukuphupha ngengxowa Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Uninzi lwethu, ibhegi liqabane elihlala lihleli. Ingxowa yokuhamba iqulethe ezona zinto zethu zibalulekileyo xa sigubungela imigama emide kwaye sityelele iindawo ezahluke ngokupheleleyo ngelixa siseholideyini.
Ibrifkheyisi iqulethe iifolda kunye namaxwebhu abalulekileyo eshishini; ibhegi ivumela ukuba sihlale sinesidingo esibalulekileyo kwaye sinezandla zethu simahla. Ingxowa yebhanti ikwasebenza nayo le njongo. Sikwafuna neebhegi zokuphatha izinto esizithengileyo. Ke, ibhegi inokusetyenziswa njengezothutho olusulungekileyo okanye inokumela isiqwenga sekhaya esihlala siphethe ngaso.
Akuqhelekanga ukuba yonke indawo ibonakale ifihliwe esikhwameni. Ukubaluleka kwengxowa kuthathwa ngokugqithileyo kumfanekiso kaMary Poppins, onokuyikhupha ngokwenyani yonke into evela emazantsi angenakulinganiswa ebhegini yakhe. I-holster inokubonwa njengengxowa yompu.
Kodwa yintoni i-subconscious yethu efuna ukusixelela yona xa siphethe ibhegi ephupheni okanye siyifaka esiqwini semoto?
Ngapha koko, ibhegi ihlala ilahleka ephupheni: abaninzi abaphuphayo baxela ngayo emva kokuvuka. Lithetha ntoni eli phupha likhethekileyo, uya kulifumana kule tekisi ilandelayo. Emva koko funda konke malunga nohlalutyo lwamaphupha ngokubanzi lwesimboli.
1 Uphawu lwephupha «ibhegi»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ingxowa elahlekileyo, amashwa! Iphupha elibi?
2 Uphawu lwephupha «ibhegi» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ipokotho» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ibhegi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ibhegi»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ingxowa elahlekileyo, amashwa! Iphupha elibi?
Nabani na oneentloni ngemicimbi yemihla ngemihla uhlala ephupha ngengxowa elahlekileyo. Ukuba sisipaji somfazi esinyamalala ngesiquphe kumcimbi wephupha, umntu ophuphayo usenokuba ulophule unxibelelwano necala labo lobufazi. Ngendlela, olu toliko lusebenza nakwabaphuphi abangamadoda, kuba ngapha koko, kukho nenxalenye encinci yabasetyhini kuyo yonke indoda, kwaye ngokuchaseneyo.
Uphawu lwephupha «ibhegi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ingxowa njengophawu lwephupha ludibene nomntu obhinqileyo. Ukuba uphupha ibhegi, hlala phantsi neyakho iimpawu zabasetyhini ngaphandle, ngakumbi ukuba yingxowa yesandla. Awungekhe ukwazi ukwenza ubuhlobo nokuba ngumfazi okanye, njengendoda, ukwamkela icala lakho leemvakalelo. Nangona kunjalo, uyakwazi ukusebenzisa iitalente zakhe kunye nokuqonda iimeko ezinzima nangakumbi.
Ingxowa inokulandela iimvakalelo kunye namava akho angaphambili okanye amava akho aqokelelweyo Conocimiento uphawu. Oko kuqhutywa engxoweni kunokubandakanya ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda okanye izimvo. Ngamanye amaxesha, iphupha lepokotho limele isilumkiso ngokuchasene nobusela. Oku kunokuthetha ngokufuziselayo: akufuneki uvumele isonka ukuba senziwe ngefestile.
Ukuphulukana nesipaji kuthetha into ekuyiyo okanye eya kuba neentloni kuwe, ukuba sisipaji, mhlawumbi ulahlekelwe kukunxibelelana necala lakho lobufazi. Iingxowa ezinkulu nezinzima zibonisa ukuba ufuna ukuhamba, mhlawumbi uyakulangazelela Utshintsho lwendawo?
Umfanekiso wephupha «ibhegi» ungasetyenziselwa iintsuku ezingcono yima emva kwentlungu. Ukuba ephupheni ufumana ibhegi ocinga ukuba ilahlekile, oku kubonisa isiganeko esimangalisayo ebomini bakho. Ukubeka into okanye ukubeka into epokothweni, kwelinye icala, luphawu lwe ilahlekoNokuba uzama kangakanani ukugcina into, ubunini akufane kwenzeke ukuba busisigxina.
Ukugqogqa okanye ukukhangela isipaji somnye umntu kubonisa umfanekiso wephupha imfihlolowo uphuphayo angathanda ukuphonononga kulo el mundo yomlindo. Uziphu wengxowa ephupheni ubhekisa kukuziphatha komntu olalayo kubudlelwane phakathi kwabantu.
Ukuba unitha ibhegi ngelixa ulele, akufuneki ube nomdla ogqithisileyo xa uvukile. Ingxowa eyenziwe ngelinen njengophawu lwephupha ihlala izisa ubutyebi kunye nolonwabo.
Uphawu lwephupha «ipokotho» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuze utolike ngokwengqondo iphupha lakho lengxowa, kuya kufuneka ujonge ukuba loluphi uhlobo lwebhegi nokuba yintoni onxulumana nayo. Umxholo nawo ubalulekile. Izinto ezizodwa ezingxoweni zinokumela iipropathi okanye abantu obathandayo phambi kwabanye fihla Ndingathanda. Ukuba kwelinye icala ibhegi iyabonakala, unokuziva ungonwabanga ukujonga.
Isimboli yephupha inokusetyenziselwa ukufihla. iminqweno yesini kuba. Bahlala bekhona, kodwa ababonakali. Ngokukodwa xa kufikwa kwisikhwama, unako ukusondelelana uphawu. Okubi nangakumbi ukuba bayayilahla: usenokuziva ubhengeziwe ebomini bokuvuka okanye ukhathazekile ukuba imfihlo iya kufunyanwa.
Uphawu lwephupha «ibhegi» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, ibhegi ithetha imfihlo okanye ulwazi olufihliweyo. Mhlawumbi sele uyiphethe ungazi, okanye uyazibuza ukuba ungabelana ngolwazi lwakho lokomoya nabanye abantu.
Iphupha malunga nokubaleka imoto